Sirnaafi Caasaan namni kun diriirsaa jiru isas, Oromoos saboota biroos kan cabsudha. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSirnaafi Caasaan namni kun diriirsaa jiru isas, Oromoos saboota biroos kan cabsudha.
Sirnaafi Caasaan namni kun diriirsaa jiru isas, Oromoos saboota biroos kan cabsudha.
Hundarra caalaa sirna Habashaa, habashootarra caalaa kan fannisee fuudhee ka’aa jiru isa. Mormiin Qeerroon alana taasisuu qabu akka namni kun masaraa Minilik ho’ifatee keessa bubbuluuf qopheeffate kana keessaa darbachuuf falmuudha. Isuma dhugaati, namni kun diina qabsoo Oromootu bakka qabate. Afaan Oromoo dubbachuunsaafi afaan dammaan as ba’uunsaa baayyee namoota gowwoomse. Filnannoon haqaa jiraannaan kana baruma dhufu achirraa gatuudha. Akka maddakootti kun dhuguma bowwaatti fiigaa jira!Beekan G Erena
Dargaggoon suuraan isaa miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture Gammachuu Gaaromsaa jedhama